Cute beginner full makeup.. | YUYU BEAUTY
You are at:Home»Makeup»Cute beginner full makeup..
Cute beginner full makeup..
By on	 14/07/2016 Makeup
ခေတ်စားနေသော Cute full makeup လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Primer ကိုမျက်နှာတစ်ပြင်လုံး အနှံ့လိမ်းပါမယ်။
Cusion ကိုပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးအနှံ့သုံးပါမယ်။
3.Two way သုံးပါမယ်။
Two way ကို ဖော့ဖြင့်မျက်နှာပေါ်တွင် ညင်သာစွာ ပုတ်ပေးပါမယ်။
4.Eyeshadow ပန်းနုရောင် သုံးပါမယ်။
Eyeshadow ကို ပန်းနုရောင်ကိုမျက်ခွံအပြည့် ခြယ်ပါမယ်။
7. နှုတ်ခမ်းနီ ဆုိုးပါမယ်။
8.Setting spray ဖြန်းပါမယ်။
မိတ်ကပ်သားကြာကြာခံချင်တဲ့အတွက် setting spray ဖြန်းပါမယ်။
9. ပြီးပြည့်စုံ သွားပါပြီ။
Innisfree Long Wear Cushion SPF50+ PA+++, 15g, Innisfree Online Shop, Korean cosmetics. Free Shipping to worldwide (Order above $50), 100% safe shipping guaranteed
Kate color shas diamond PK-1